Iyo IP kero 192.168.8.1 iri IANA yakanyoreswa kungoshandiswa wega wega. Mukati meNzvimbo yeNzvimbo Network, iwe chete unogona kushandisa iyi IP kero & haigone kushandiswa pamusoro peInternet. Unogona kushandisa iyi kero ye IP 192.168.8.1 yekuvhura iyo router admin pani uye nekuita mashoma ekugadzirisa kune ayo default marongero. Mamwe mashoma ekushandurwa kwakadai anosanganisira kushandura password & zita rezita, maratidziro, kuisa firewall, & kumisikidza kwemidziyo.
IP 192.168.8.1 inoshandiswa pakukurukurirana nemaitiro akasiyana siyana mukati mevande network. Iyo inoshandiswa kunyange mukugadzirisa zvishandiso zvemasaiti nekuunza iyo login maitiro.
Gadzira iyo Router kuburikidza 192.168.8.1
Mushure mekunge mapinda mukati meiyo router interface pa 192.168.8.1, inguva yekushandura marongero kuti uzive sarudzo yako yekutanga. Tambo huru dzenhamba & zvipfupiso zvinogona kutaridzika sezvisingasvikike, asi iwe unogona kuzorora zviri nyore uchiziva kuti marongero ese anogona kugadziriswazve kuita default nekurova kwebhatani. Asi zvinobatsira kuziva pekutangira; nokudaro chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kushandura ndidzo dhata dzekupinda pamusoro dzataurwa pamusoro:
Sarudza menyu akajairwa marongero
Sarudza iyo password password kana imwewo-yakatumidzwa sarudzo
Nyora yako yaunoda password
Iwe unofanirwa kutora iro zita rekushandisa kune iyo router pane yakafanana menyu iyo iwe yaunogona kuchinjisa kune iro zita rekutanga sarudzo yako.
Chinja iyo Yemunharaunda IP Kero 192.168.8.1
Imwezve yekumisikidza iwe yaungade kuchinjisa ndiyo yemuno IP kero yeiyo router, iine kumberi pane misiyano iri pakati peveruzhinji & yemunharaunda IP kero inotsanangurwa pazasi. Kana iwe ukachinja yako yemuno IP kero yeiyo router, hauzive nzira yekuwana iyo router na 192.168.8.1, saka unofanirwa kusimbisa kurangarira kero yako yazvino. Kuchinja kero:
Shanyira iyo setup menyu kana zvakafanana -yakatumidzwa sarudzo
Rova pane sarudzo network network.
Pazasi pane marongero e router, nyora mune yako yaunofarira IP kero
Kuchengetedza izvo zvinogadziriswa
Imwe yeakasarudzika IP kero ndeye 192.168.8.1, asi zvisingaite 192.168.0.1 or 192.168.1.1 kwete kazhinji kazhinji makambani anoshandisa iyi kero yemukati. Zvichava zvine musoro kutaura kuti vangangoita vese havashandise. Zvakare chinhu ichi hachiwirirane navo, sezvo vaine zvakafanana mashandiro - anoshandiswa kupinda muwebhu interface yeiyo router.
Inoshandura Wi-Fi Network Zita
Kubudikidza nezvirongwa zveiyo chaiyo router yakagadziridzwa, unogona kutanga kuwana yakawedzera nezita reti router yeWi-Fi network kuva nzvimbo yakajeka kutanga. Sevhisi Set Set Identifier kana SSID izita rinoparadzanisa netiweki yeWi-Fi ye router kubva kune vamwe vepedyo. Izita rinogona kunge riri chero chinhu chaunoshuvira kana zvisiri kutsamwisa. Nekukanganisa, zita racho rinogona kunge rakajairika kuti ubatsire kusiyanisa network iwe yaunofanirwa:
Shanyira setup menyu zvimwe zvakafanana -akatumidzwa sarudzo
Rova pane sarudzo isina waya marongero.
Nyora mumazita ako aunoda enetwork mukati meiyo SSID bhokisi
Mushure mekushandura zita remaWi-Fi network, unogona kugadzirisa password. Bhokisi repassword richava pane imwechete menyu sezita renetiweki.
Izvo zvigadziriso zvepamusoro zvinokutendera kuti uwane iro rairita chengetedzo rakarongeka izvo zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti munhu anotsvaga mambure kuburikidza netiweki yako ari kuita zvakachengeteka kudaro. Kubva pano, unogamuchirwa kuti uwane sarudzo dze router yako zvakanyanya. Mazhinji mairaira anoperekedza marongero evabereki aunogona kumisikidza, & mashoma anobvumidza kumisikidzwa kwenzvimbo dzinoverengeka kana chero sevhisi yeVPN.
Zvimwe pane iyo IP 192.168.8.1
192.168.8.1 Iyi inonzi gedhi, yakavanzika, kana yekero IP kero inoonekwa senge pamusoro penzvimbo yeWi-Fi. 192.168.8.1 Inowana anoshandiswa kune ese ari maviri kuwana iyo rauta interface & kubvumira mambure-anokwanisa madhizaina kuti abatanidze kune iyo router. Iwe unogona kufunga nezve IP kero ye router yako sePOX Bhokisi retsamba. Mapakeji ese aunowana kuburikidza nepositi hofisi anonanga kuPOX Bhokisi, kunyangwe pane kuti iwe uende kunounganidza, yako router inozobva yatumira iyo posvo kune PC chishandiso icho chaida icho.
Kana iwe uri mubati wechigadzirwa ne IP chinyorwa & 192.168.8.1 ndiyo kero isiriyo, iwe unowana yekupinda hwindo kana uchinge wanyora mune kero bar yebrowser. Ipapo iwe unongoda kushandisa default username & password.
Troubleshooting iyo IP kero 192.168.8.1
Pane imwe nguva nenguva, zvakajairika kuita nyaya dzakasiyana neako router. Kana iwe usingakwanise kupfuura pamberi pechiratidziro chekupinda, pane zvimwe zvinhu zvaunoda kutarisa. Tarisa uone kuti yako internet yakadzikama uye isiri kuchinja. Imwezve sarudzo ndeye kushandisa iyo Command Prompt kuti uone iyo default gateway. Unogona kunge uri kushandisa isiriyo kero ye IP kuwana mushandisi interface. Kuti uwane rumwe rubatsiro, iwe unogona kutotaurirana neako internet mutengesi.
Pane zvimwe zvinodiwa zvatinofanira kuteedzera kupinda muiyi IP kero & nekugadzirisa zvinodiwa. Icho chinonyanya kukosha kuve munharaunda yeiyo router network kana kungopinda. Isu tinofanirwa kubatanidzwa kune iwo maratidziro akafanana neiyo router kuti tiite shanduko dzakakosha mu firmware sezvo iri yega IP kero. Chipingamupinyi chikuru chine chekuita neiyi IP kero ndechekuti haigone kuwanikwa paWWW uye saka zvinotimanikidza kuve munzvimbo ye rauta network kuti tione kune webhu interface. Webhu bhurawuza redu rinofanirwa kunge rakaomarara (Google Chrome, Mozilla Firefox, nezvimwewo) sezvo iyi nzira ichida pop-up HTML5 rutsigiro.
Kana iwe uri admin weiyo router inova ye IP kero 192.168.8.1 ipapo nekushandisa iyo IP kero 192.168.8.1, iwe unogona kuita chero chinodiwa chinongedzo kune yako router & kunyange kuchinja iyo yekumisikidza kumisikidza yako router.
Kunze kwezvo, iwe unogona kuita yakawanda yekuwedzera neiyi IP kero sekushandura mazita evashandisi, password, kudzora marongero enetiweki, firewall kumisikidzwa & nezvimwe zvakawanda.
Heano mashoma emamwe akakosha maficha e IP kero 192.168.8.1.
Kuchinja iyo password & Username.
Kudzora QoS & Network Zvirongwa.
Kuvhura & Kuvharira kweMagumo-Mudziyo.
Kugadzira Firewall & Chengetedzo Setting
Iwe unogona kugadzirisa & kushandura marongero aya mushure mekunge iwe wapinda mu admin webpage ye router yako iri yeIP kero 192.168.8.1. Uye kuti upinde muI IP Kero 192.168.8.1, iwe unofanirwa kunyora mune kero bar IP kero http://192.168.8.1 yebrowser yako kana kudzvanya kuti uwane kutsigirwa kwe admin yako kana iri IP kero 192.168.8.1.
Iwe unofanirwa kugadzirisa zvakare yako router kuti iwedzere kunakidzwa kushandiswa. Pane akawanda marongero anogona kumisikidzwa muhutongi pani yeiyo router. Iwe unogona kudzidza zvakawanda pawebhu webhu.
Chinyorwa cheZita rezita nePassword ye 192.168.8.1
HUAWEI arun arun
HUAWEI mushandisi mushandisi